खेलकुद Archives - Page3of 58 - RatoKalam.com is No one news portal.
चैत २१ देखि मंगलवारेमा भलिवल प्रतियोगिता
दमक ,२५ फागुन । आगामी चैत्र २१ गतेदेखि कमल ५ स्थित मंगलवारे वजारमा तीन दिने प्रदेशस्तरिय अन्तर स्थानीय तहवीच एसवाइसी च्यालेन्ज भलिवल प्रतियोगिता हुने भएको छ । स्थानीय सगुन युवा क्लवले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतियोगिता गर्न लागिएको जनाएको हो । क्लवले १२ औ संस्करणसम्म खुल्ला भलिवल प्रतियोगिताको आयोजना गरिआएको थियो...
फाइनलमा झापा ११ सँग आर्मीको भिडन्त
बिर्तामोड । बिभागीय टीम त्रिभुवन आर्मीले क्यामरुनी टिम दाफिन्सलाई १–० ले स्तब्ध बनाउँदै झापा गोल्डकपको उपाधि नजिक पुगेको छ । अघिल्लो दुई संस्करण जितिसकेको आर्मीले शनिबार दाफिन्सलाई हराउँदै उपाधिका लागि झापा ११ सँग भेट पक्का गरेको छ । दाफिन्सलाई आर्मीले पोखराको आहा रारामा पनि १–० गोलले नै स्तब्ध बनाएको थियो ।...
कुमार खड्का फागुन २५, पथरी चौथो नगर स्तरिय खुला नक आउट फुटवल प्रतियोगिताको शनिवारको फाइनल खेलमा वडा नम्वर १ ले वडा नम्वर ९ लाई ० का विरुद्ध २ गोल गर्दै फाईनलको ट्रफि चुमेको छ । गत फागुन १७ गते देखी सुरु भएको सो प्रतियोगिको अन्तिम चरणको सेमिफाईनल खेलमा वडा १ का लागि...
पथरीमा जारी वडा कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा वडा नम्बर १ र ९ भिड्ने
कुमार खड्का फागुन २४, पथरी चौथो नगर स्तरिय खुला नक आउट फुटवल प्रतियोगिताको शुत्रवारको खेलमा वडा नम्वर १ ले वडा नम्वर ८ लाई १ का विरुद्ध ३ गोल गर्दै फाईनलमा आफ्नो स्थान पक्का पारेको छ । गत फागुन १७ गते देखी सुरु भएको सो प्रतियोगिको अन्तिम चरणको सेमिफाईनल खेलमा वडा १ का...
खन्तीले खनेर बनाएको प्यारफिटमा हजारौ दर्शक
बिर्तामोड, झापाको बिर्तामोडस्थित डोमालाल राजवंशी रंगशालामा जारी झापा गोल्डकप दैनिक हजारौं दर्शकले हेरिरहेका छन् । फुटवल हेर्ने दर्शकका लागि स्थायी प्याराफिट नहुँदा प्रत्येक वर्ष खन्तीले खनेर अस्थायी प्याराफिट बनाइन्छ । वास र डोरी प्रयोग गरेर बनाइएको अस्थायी प्याराफिटमा वसेर हजारौं दर्शकले फुटवलको मञ्जा लिन्छन् । जसका लागि आयोजकले प्रत्येक वर्ष खन्तीले...
झापा गोल्डकप: रुपन्देहीलाई हराँउदै दाउफिन्स सेमिफाइनलमा
झापा। विदेशी टोली क्यामरुनको दाउफिन्स फुटबल क्लब जारी चौथौ झापा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । रुपन्देही ११ एफसीलाई २–० गोलअन्तरले पराजित गर्दै दाउफिन्स अन्तिम चारमा पुगेको हो । बिर्तामोडस्थित डोमालाल राजवंशी रंगशालामा बिहिवार सम्पन्न प्रतिस्पर्धात्मक अन्तिम क्वार्टरफाइनल खेलमा दाउफिन्सले पहिलो हाफ र दोस्रो हाफमा एकएक गोल गरेको थियो । डिबक्समा...
उर्लाबारी वडा नं. ९ सेमिफाइनलमा
उर्लावारी २३ फगुन मोरङ उर्लाबारीमा जारी दोश्रो प्रतिष्ठीत उर्लाबारी मेयर–कप फुटबलको बिहिवारको खेलमा वडा नं. ९ विजयी हुदै सेमिफाइनलमा प्रबेश गरेको छ । खेल सुरु भएको ३ मिनेटमा वडा नं. ९ बाट प्रकाश नाल्बोले १ गोल गरेका थिए भने वाडा नं. ५ सुन्य रहेको थियो । खेलको दाश्रो हाफमा वडा...
आज बाट सेमिफाईनल चरणका खेल सुरु पहिलो सेमिफाइन खेल वडा नम्वर ९ र ५ विचमा हुने
कुमार खड्का फागुन २३,पथरी चौथो नगर स्तरिय खुला नक आउट फुटवल प्रतियोगिताको विहिवार पहिलो चरणको सेमिफाइन खेल वडा नम्वर ९ र ५ का विचमा हुने भएको छ । वुधवारको खेलमा साविक विजेत वडा नम्वर १ ले २ लाई ५–४ गोल अन्तरले पाखा लगाउदै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको थियो । निर्धारित ७० मिनेटको खेल ३–३...
झापा गोल्डकप : पुलिसको चुनौति पन्छाउँदै थ्रीस्टार सेमिफाइनलमा
बिर्तामोड । बिभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई हराउँदै दावेदारमानिएके रुस्लान थ्रीस्टार क्लब जारी मगमग चौथो झापा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । बुधबार भएको तेस्रो क्वाटरफाइन्लमा थ्रीस्टारले पुलिसलाई टाईब्रेकरमा ३–० ले हराउँदै अन्तिम चारको यात्रा पक्का गर्यो । अब सेमीफाइनलमा थ्रीस्टारले आयोजक मगमग झापा ११ सँग प्रतिष्पर्धा गर्नेछ । यसअघि निर्धारित ९०...
चौथो नगर स्तरिय खुला नक आउट फुटवल प्रतियोगिताको आजको खेलमा वडा नम्वर १ विजयी
कुमार खड्का फागुन २२, पथरी । चौथो नगर स्तरिय खुला नक आउट फुटवल प्रतियोगिताको आजको खेलमा वडा नम्वर १ विजयी वनेको छ । साविक विजेत वडा नम्वर १ र २ का विचमा भएको आजको निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा वडा नम्वर १ ले २ लाई १ गोलको अन्तरले जितेको छ निर्धारित...